သတင်း - မြေဆီလွှာအခြေအနေအတွက် ပြောင်းစိုက်သူ၏လိုအပ်ချက်များ
စက်မှုလယ်ယာစနစ်ဖြင့် အထွက်နှုန်းမြင့် စိုက်ပျိုးနည်းပညာသည် အထွက်နှုန်းကောင်းပြီး ထိရောက်မှုမြင့်မားသော စိုက်ပျိုးမှုဖြစ်သည်။မြင့်မားသောမြေဆီဩဇာအပေါ်အခြေခံ၍ စံပြုစံပြစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသောစိုက်ပျိုးရေးအစီအမံများမှတစ်ဆင့် အာဟာရဓာတ်၊ အလင်းရောင်၊ အပူချိန်၊ ရေ၊ အပူ၊ အပူစသည်ဖြင့် အာဟာရလိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းတွေ ထုတ်ပေးတယ်။ထို့ကြောင့်၊အသုံးပြုမှုပြောင်းစိုက်သူများကုန်းမြေညီညာသော၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ ချောမွေ့သောမြေ၊ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်များ ပေါများပြီး စပါးစိုက်ပျိုးရန် မြေဩဇာကောင်းမွန်သောမြေကို ရွေးချယ်သင့်သည်။
ပြောင်းဖူးအမြစ်အလွှာသည် သိပ်သည်းပြီး အရေအတွက် ကြီးမားသည်၊ ဒေါင်လိုက်အတိမ်အနက်သည် ၁ မီတာကျော်အထိ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ အလျားလိုက် ဖြန့်ဖြူးမှုသည် ၁ မီတာခန့်ရှိပြီး မြေဆီလွှာတွင် ခိုင်ခံ့ပြီးသိပ်သည်းသော အမြစ်စနစ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ပြောင်းဖူးအမြစ်များ၏ အရေအတွက်၊ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်တို့သည် မြေဆီလွှာ၏ အတိမ်အနက်နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။နက်ရှိုင်းသောမြေလွှာဆိုသည်မှာ သက်ရှိမြေလွှာအလွှာသည် နက်ရှိုင်းသင့်ပြီး ပင်မမြေလွှာနှင့် မြေအောက်အလွှာသည် ထူထပ်သင့်သည်။တက်ကြွသောမြေဆီလွှာသည် ရင့်ကျက်သော လယ်ထွန်အလွှာဖြစ်ပြီး မြေဆီလွှာသည် လျော့ရဲလာကာ ချွေးပေါက်ကျယ်သည့် အချိုးအစားသည် သင့်လျော်ပြီး ရေ၊ ဓာတ်မြေဩဇာ၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့် အပူဓာတ်တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပေါင်းစပ်၍ ကြီးထွားမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ root စနစ်။မြေဆီလွှာလွှာသည် အလွန်ပါးလွှာပါက အမြစ်စနစ်၏ ဒေါင်လိုက်ကြီးထွားမှုကို ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ရေကို မျှတမှုမရှိစေဘဲ အထွက်နှုန်းနည်းမည်ဖြစ်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် စပါးကြီးထွားမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေသော မြေဆီလွှာတစ်ခုလုံး၏ အထူသည် အနည်းဆုံး 0.82m သို့မဟုတ် ထို့ထက် ပိုနေသင့်သည်။
2. မြေညှိရန် လိုအပ်သည်။
မကြဲမီတွင် လယ်၏အမြင့်သည် တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး တွင်းမရှိစေရန် စပါးကို ထယ်ထိုး၍ ညှိရမည်။မျိုးစေ့အရည်အသွေး မထိခိုက်စေရန် အမှိုက်ကြီးများကို ကောက်ယူရမည်။
3. မြင့်မားသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်စင်နှင့် ထယ်လွှာရှိ အာဟာရဓာတ်များ ရရှိနိုင်သည်။
ပြောင်းဖူးကြီးထွားမှုဖြစ်စဉ်တွင် မြေဆီလွှာအာဟာရ ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်းသည် အထွက်နှုန်းမြင့်မားစေရန် အခြေခံ ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။စပါးမှစုပ်ယူသော အာဟာရဓာတ်များသည် မြေဆီလွှာနှင့် မြေသြဇာမှ အဓိကရရှိကြသည်။စပါးအတွက်လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်၏ ၃/၅-၄/၅ သည် မြေဆီလွှာထောက်ပံ့မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ဓာတ်မြေသြဇာမှ 1/5~2/5 ဖြစ်သည်။မြေဆီလွှာ၏ ကြီးမားသော အလားအလာရှိသော ဩဇာကြီးထွားမှု၊ သင့်လျော်သော အချိုးအစား၊ လျင်မြန်သော အာဟာရအဖြစ် ပြောင်းလဲမှု၊ မြင့်မားသော အာဟာရဓာတ်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် မျှတသော ထောက်ပံ့မှုတို့ကြောင့် ပြောင်းဖူးကြီးထွားမှုဖြစ်စဉ်တွင် ပိုးမွှားနှင့် အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း မရှိပေ။မြေဆီလွှာ၏ ဆားငန်ဓာတ်နှင့် အချဉ်ဓာတ် (pH) သည် ပြောင်း၏ ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် ကြီးမားသော လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ပြောင်းဖူး၏ pH တန်ဖိုးသည် 5.0 ~ 8.0 သို့ လိုက်လျောညီထွေရှိသော အကွာအဝေးမှာ 5.0 ~ 8.0 ဖြစ်သည်၊ သို့သော် သင့်လျော်သော pH တန်ဖိုးသည် 6.5 ~ 7.0 ဖြစ်ပြီး ကြားနေနှင့်နီးစပ်ပါသည်။ပြောင်းဖူး၊ နေကြာနှင့် သကြားမုန်လာဥတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အယ်လကာလီခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းသည်။ဆားများထဲတွင် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများသည် ပြောင်းဖူးအတွက် ပို၍အန္တရာယ်ရှိသည်။
4. မြေဆီလွှာစိမ့်ဝင်မှု နှင့် ရေထိန်းသိမ်းခြင်း စွမ်းဆောင်ရည်
အထွက်နှုန်းမြင့်သော ပြောင်းခင်းများတွင်၊ နက်ရှိုင်းသော ရင့်ကျက်သော မြေလွှာ၊ ကြွယ်ဝသော အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပစ္စည်း ပါဝင်မှု၊ ပိုမို တည်ငြိမ်သော စုစည်းမှုနှင့် ထယ်လွှာအောက်ရှိ ကျစ်လျစ်မှုတို့ကြောင့် ရင့်ကျက်သော မြေလွှာသည် ရေကို လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး အူတိုင်မြေလွှာသည် ရေထိန်းသိမ်းမှု စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်နှာပြင်အလွှာအောက်တွင် မကြာခဏ စိုစွတ်နေပါသည်။မိုးခေါင်ရေရှားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပြည်နယ်၊
အကျဥ်းရုံးသည်,ပြောင်းစိုက်သူများအထွက်နှုန်းကောင်း၊ ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် လယ်ယာသုံး စက်ယန္တရားများဖြစ်သည်။မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ခြင်း။ပြောင်းစိုက်စက်စပါးစိုက်ပျိုးမြေသည် စပါးအထွက်နှုန်းတိုးတက်စေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
တင်ချိန်- ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄-၂၀၂၂